ငလျင်ကို ကြိုသိနိုင်ဘို့- ဗေဒင် မဟုတ်သော နည်းလမ်းများ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ပါ တို့ကို လေ့လာပါ။
(၁) earthquake lights ဆိုတဲ့ ငလျင် အလင်းရောင်။
ငလျင်အကြီးကြီး တခု ဖြစ်တော့မယ် ဆိုယင်- ရက်အနည်းငယ် ကတည်းက- မြေကြီး နေရာ အချို့ကနေ- အလင်းရောင်း များ ထွက်တတ်တယ် ဆိုပါတယ်. တခါ တလေ တော့လည်း- စက္ကန့် အလိုကျမှ အလင်းရောင်များ ထွက်လာတတ် တယ် ဆိုပါတယ်။ အပြာရောင် အလင်း ဖြစ်တတ်ပြီး- မြေကြီးကနေ အပေါ်ဘက်ကို လျှပ်စီး လက်နေသလိုမျိုး မြင်ရတတ်တယ် ဆိုပါတယ်.
(၂) တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ ပုံမှန် မဟုတ်တဲ့ အပြုအမူ တွေပါ။
အထူးသဖြင့်- ပျားတွေ၊ ငှက်တွေ၊ ၀က်ဝံ တွေ ဟာ- သူတို့ အောင်းနေရာကနေ ထွက်လာ တတ်ပါတယ်.
ငလျင် လှုပ်ခါနီးမှာ ကြက်တွေဟာ လည်း- ဥ-အုတာ ရပ်သွားတတ်ပါတယ်။
အိမ်မှာ ငါးခူ မွေးထားနိုင်ယင် အင်မတန် ကောင်းပါတယ်။
ငါးခူ ဟာ- လျှပ်စစ် သံလိုက်လှိုင်းတွေ ကို အာရုံ ခံနိုင်စွမ်း ကောင်းတဲ့ အတွက်- ငလျင် လှုပ်ခါ နီးမှာ ငါးခူတွေဟာ- ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်.. ကူးခတ် နေကြပါလိမ့်မယ်။
ခွေးနဲ့ ကြောင် တို့ကတော့- သူတို့လောက် စောစာ မသိပေမယ့်- လူတွေထက် စာယင် နည်းနည်း စောသိ တတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ ကြောက်လန့် နေပုံ ရသလား သတိပြုပါ။
(၃) ငလျင်ကြီး မလှုပ်ခင်- ငလျင်လေး foreshocks တွေ လာတတ်တာမို့- အဲဒါကိုလည်း သတိပြုကြပါ။
၂၀၀၈-ခုနှစ်၊ မေလ ၁၂-ရက်တွင် – တရုတ်ပြည် – စီချွမ် ဒေသတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၅၈- အတွင်း အပြင်းဆုံး ငလျင်ကြီး ဖြစ်ပြီး- လူပေါင်း ၆-သောင်း၊ ၈-ထောင် ၏ အသက်ကို နှုတ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီး၊ လူဦးရေ ၄.၈ သန်းကို အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ ဖြစ်စေသော ငလျင်ကြီး ပေါ်ပေါက်ခဲ့စဉ် က- ဖားများ ထူးခြားစွာ ထွက်ပေါ်လာကြပုံ..
ငလငျြကို ကွိုသိနိုငျဘို့- ဗဒေငျ မဟုတျသော နညျးလမျးမြား ဖွဈပါတယျ။
အောကျပါ တို့ကို လလေ့ာပါ။
၁) earthquake lights ဆိုတဲ့ ငလငျြ အလငျးရောငျ။
ငလငျြအကွီးကွီး တခု ဖွဈတော့မယျ ဆိုယငျ- ရကျအနညျးငယျ ကတညျးက- မွကွေီး နရော အခြို့ကနေ- အလငျးရောငျး မြား ထှကျတတျတယျ ဆိုပါတယျ. တခါ တလေ တော့လညျး- စက်ကနျ့ အလိုကမြှ အလငျးရောငျမြား ထှကျလာတတျ တယျ ဆိုပါတယျ။ အပွာရောငျ အလငျး ဖွဈတတျပွီး- မွကွေီးကနေ အပျေါဘကျကို လြှပျစီး လကျနသေလိုမြိုး မွငျရတတျတယျ ဆိုပါတယျ.
၂) တိရစ်ဆာနျတှရေဲ့ ပုံမှနျ မဟုတျတဲ့ အပွုအမူ တှပေါ။
အထူးသဖွငျ့- ပြားတှေ၊ ငှကျတှေ၊ ဝကျဝံ တှေ ဟာ- သူတို့ အောငျးနရောကနေ ထှကျလာ တတျပါတယျ.
ငလငျြ လှုပျခါနီးမှာ ကွကျတှဟော လညျး- ဥ-အုတာ ရပျသှားတတျပါတယျ။
အိမျမှာ ငါးခူ မှေးထားနိုငျယငျ အငျမတနျ ကောငျးပါတယျ။
ငါးခူ ဟာ- လြှပျစဈ သံလိုကျလှိုငျးတှေ ကို အာရုံ ခံနိုငျစှမျး ကောငျးတဲ့ အတှကျ- ငလငျြ လှုပျခါ နီးမှာ ငါးခူတှဟော- ကွမျးကွမျးတမျးတမျ.. ကူးခတျ နကွေပါလိမျ့မယျ။
ခှေးနဲ့ ကွောငျ တို့ကတော့- သူတို့လောကျ စောစာ မသိပမေယျ့- လူတှထေကျ စာယငျ နညျးနညျး စောသိ တတျကွပါတယျ။ သူတို့ ကွောကျလနျ့ နပေုံ ရသလား သတိပွုပါ။
၃) ငလငျြကွီး မလှုပျခငျ- ငလငျြလေး foreshocks တှေ လာတတျတာမို့- အဲဒါကိုလညျး သတိပွုကွပါ။
၂၀၀၈-ခုနှဈ၊ မလေ ၁၂-ရကျတှငျ – တရုတျပွညျ – စီခြှမျ ဒသေတှငျ ဖွဈပှားခဲ့သော နှဈပေါငျး ၅၈- အတှငျး အပွငျးဆုံး ငလငျြကွီး ဖွဈပွီး- လူပေါငျး ၆-သောငျး၊ ၈-ထောငျ ၏ အသကျကို နှုတျယူနိုငျခဲ့ပွီး၊ လူဦးရေ ၄.၈ သနျးကို အိုးမဲ့ အိမျမဲ့ ဖွဈစသေော ငလငျြကွီး ပျေါပေါကျခဲ့စဉျ က- ဖားမြား ထူးခွားစှာ ထှကျပျေါလာကွပုံ..